Real Madrid iyo Juventus ayaa laga reebay inay u soo gudbaan wareega quarter finalka ee… – Hagaag.com
Real Madrid iyo Juventus ayaa laga reebay inay u soo gudbaan wareega quarter finalka ee…
Posted on 8 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
In kasta oo la hakiyey horyaalada Yurub ee kubbadda cagta bilooyin sababo la xiriira cudurka faafa ee Coronavirus, saameynta hakinta ayaa ka muuqatay iska hor imaadyadii u dhexeeyay Man City iyo Real Madrid, halka Juventus ay la dheeleen Lyon lugta labaad ee wareeggan tartankan, taasoo keentay in City iyo Lyon ay isku arki doonaan sideed dhamaadka UEFA Champions League oo ka dhigan ciyaar dhex mareysa Ingriis iyo Faransiis.
In kasta oo guulo maxalli ahi ay gaartay Real Madrid isla markaana ay ku guuleysatay hanashada horyaalnimada Spain, haddana waxay ku guuldarreysatay inay ka gudubto Manchester City isla markaana ay guuldarro ka soo gaarto Etihad Stadium 2-1 ka dib markii isla natiijadaasi ay kala kulantay garoonkeeda Santiago Bernabeu, kooxda City ayaa ku rajo weyn sanadkan in ay hanato horyaalnimada Yurub.
Raheem Sterling ayaa goor hore u dhaliyay City gool daqiiqadii sagaalaad khalad uu sameeyay daafaca Real Varane, Karim Benzema ayaa barbareeyay isagoo madax ku dhaliyay daqiiqadii 28aad, Gabriel Jesus oo ka mid ah laacibiinta City ayaa ka faa iideystay khalad kale oo uu sameeyay Varane wuxuuna dhaliyay goolka labaad, halkaasi oo labada kulan ku noqotay natiijadooda 4-2.
Dhinca kale Kooxda Juventus ayaa laga ciribtiray wareegan in ay ka gudbaan inkasta oo ay gurigooda 2-1 kaga badiyeen Lyon, halka lugtii hore ee garoonka Lyon looga soo badiyay 1-0, sidaasina ay uga faa’ ideysteen sharciga goolka banaanka garoonkaada laga dhaliyo.
Labada kooxoodba waxay heleen rigoorayaal muran badan dhaliyey oo midda Lyon uu u saxiixay Memphis Depay daqiiqadii 12aad, halka rigooraha Juventus uu daqiiqadii 43aad uu saxiixay Cristiano Ronaldo, isagoo markii dambena dhaliyey goolkii labaad daqiiqadii 60aad.
Sidaa darteed askartii uu hogaaminayey Ronaldo ayaa laga reebay horyaalka Champions League.
Juventus ayaa isku dayday in ay ka gudubto Lyon laakin Lyon ayaa dhigtay daafac adag oo la dhaafi waayey, inkastoo ay kaalinta 7aad kaga jirto horyaalka Faransiiska hadana waxay awoodeen inay ka gudbaan wareeggan ee Champions League.